Milestone of 2008 (for Me) | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← Interview with Lawka AHla Online Magazine
Tragedy of Santika Pub →
January 1, 2009 · 10:57 am
Milestone of 2008 (for Me)
ကျနော့်အဖို့ ၂၀၀၈ မှတ်တိုင်များ
ကျနော်ကတော့ ဂွစာပြောပြော နေ့ထူး နေမြတ်တွေ ဘာတွေ ဘာမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကိုယ့်မွေးနေ့တောင်ကိုယ် တစ်ခါမှ အမှတ်တရ မရှိဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် အခန်းမှာ ပါတီလေးလုပ်ဖြစ်တယ်။
မနှစ်က ဖိလစ်ပိုင် သူငယ်ချင်း ဖရက်က ခရစ်ယာန်ဆိုတော့ သူ့အခန်းမှာ ပါတီလုပ်တယ်။ ဒီနှစ်လည်း သူမပြန်ခင် အကြိုအဖြစ်ရော နုတ်ဆက်ပွဲအဖြစ်ပါ ထမင်းဖိတ်ကျွေးသွားပါသေးတယ်။ ၃၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင်က မန်းလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်က ဆရာဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းလွင်ဆွေက အခန်းကိုအလှူကိစ္စလာရင်း စကားစပ်မိရာက ကျနော်လည်း ပါတီဖိတ်ထားတာမရှိ၊ ဒီပြင်ဌာနကကျောင်းသားတွေလည်းပါတီလက်မဲ့မို့ စုပြီး စားကြသောက်ကြမယ်လို့ ကောက်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ ပါတီလက်မဲ့များရဲ့ ပါတီလို့ နာမည်ပြောင်ပေးပြီး အစီအစဉ်အထွေအထူး မရှိသူတွေကို ဖိတ်ပြီး သောက်ကြ စားကြတယ်။
နှစ်သစ်ကူးည မီးပန်းဖောက်တာကနေ မီးလောင်လို့ ဘန်ကောက်က နာမည်ကြီး အဆင့်မြင့် ကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒီကာမှာ လူ ၅၉ ယောက်သေဆုံးပြီး ၂၄၃ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ နှစ်သစ်ကူး Count Down အပြီး မိနှစ် ၂၀ မှာ မီးလောင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီပျော်ပွဲစားရုံက လူတစ်ထောင်လောက်ဆံ့ပေမယ့် ထွက်ပေါက်က တစ်ခုပဲ ရှိသတဲ့။ ကျန်တဲ့တစ်ပေါက်က ဝန်ထမ်း တွေပဲ သိတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့သွားနေကျ ဘောလုံးကွင်းတစ်ဝက်လောက်ကျယ်တယ်ထင်ရတဲ့ သဝမ်ဒန်း (Red Son) ကလပ်ကြီးမှာလည်း ထွက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုပဲ ရှိတာ သတိထားမိတယ်။
မူးနောက်နောက်နဲ့ အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ဒီခြောက်ခြားစရာ သတင်းကို ကြားရတယ်။ သေတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပါတယ်။ သေတဲ့သူအများစုဟာ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အပျိုတွေပါတဲ့။ တီဗီသတင်းရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်နေတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီးက မီးတွေလောင်ပြီး မီးခိုးတွေထွက်လာတော့ နှစ်သစ်ကူးမှာ ကလပ်ရဲ့ အထူးပြုလုပ်ချက်လို့ထင်ပြီး ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ အိပ်မက်မက်နေတဲ့ ဂယောင်ခြောက်ခြားလေသံနဲ့ ပြန်ပြောတာတွေ့ရတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမနက်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ ဒီကြေကွဲဖွယ်သတင်းကြောင့် မပျော်နိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။
Blogspot ကနေ WordPress ကို ပြောင်းရေးခဲ့တယ်။ WordPress ကို ဘလော့ဂ်အတွက် ကနဦးကလိကြတော့ ကိုသင်္ကြန်၊ မှော်ဆရာတို့ကို မှီရင်း ယောင်တောင်တောင်နဲ့ပါခဲ့တယ်။ အကူအညီတောင်းလို့ ဘလော့ဂ်တွေ လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ တချို့ကိုလည်း ဒီဘက် Blogspot, WordPress ကိုပြောင်းရေးဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဂ်ရေးကြဖို့ တိုက်တွန်း၊ ကူညီခဲ့တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အောင်မြင်ခဲ့ကြတာက ဟန်သစ်ငြိမ်၊ မောင်အန့်နဲ့ ထွန်းတောက်နေတို့ပါပဲ။
ဘလော့ဂင်း ကျေးဇူးကြောင့် မိတ်ဆွေတွေ အများအပြားရခဲ့သလို ရန်သူတွေလည်း ရခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်လောကကနေ ထွက်ခွာရလောက်အောင် ကြီးကျယ်တဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြုံခဲ့ရပေမယ့် ပြန်လည် တည့်မတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဘလော်ဂါအနေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေလည်း တိုတို ရှည်ရှည် ငါးခုလောက် ဖြေခဲ့ရတယ်။ ကျနော် ဂျာနယ်လစ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်တုန်းကနဲ့စာရင် ဘလော်ဂါအဖြစ်က အချိန်တိုတိုအတွင်း ပိုလူသိများ၊ အသိအမှတ်ပြုခံရတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ (ငွေကြေးနဲ့တော့ မတိုင်းတာဘူးပေါ့။) အသံတိတ် ကူညီမှုတွေကြောင့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ပေးပို့ ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုက စာတမ်းလာဖတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်တဲ့အကျင့်အတိုင်း WordPress ရိုးရိုးနဲ့ ပြောင်းပြီး ယူနီကုဒ်ဖောင့်နဲ့ ပြောင်းရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဘလော်ဂါတစ်ယောက်အတွက် ရူးမိုက်တဲ့ စွန့်စားမှု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဖောင့်အဆင်မပြေရင် ဘယ်သူမှာ လာမဖတ်မှာ ကြောက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် Reader တွေကို ယုံလို့ ရဲရဲပဲ ပြောင်းချလိုက်တယ်။ လာရောက်မေးမြန်း၊ ဖောင့်သွင်းပြီး ဖတ်ကြတာတွေ့ရသလို မကျေနပ်သူ အနည်းငယ်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Hit Counter မှာတော့ ပုံမှန် တက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အွန်လိုင်း Activity များ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်းပါပဲ။ အကျေနပ်ဆုံးအားထုတ်မှုဖြစ်သလို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဇင်ပညာရပ်ကိုလည်း အဟုန်မပျက် လက်သွေးနေခွင့်ရခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ခုက Myanmar Online Encyclopedia (MOE) ခေါ် ဝီကီမြန်မာပါပဲ။ ပြဿနာတွေကြားမှာ စိတ်မပျက်ဘဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဆက်လည်း လုပ်နေပါဦးမယ်။
တခြားဆိုဒ်တွေက ဖိတ်ခေါ်လို့ သွားရေးသေးပေမယ့် အာရုံ မစိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်း၊ မီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ ပိုဝင်ဆံ့ခဲ့တယ်။ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အွန်လိုင်းလူမှုဆက်ဆံရေးရပ်ဝန်းထဲပဲ ရောက်နေတဲ့ ဘဝဖြစ်နေတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေတောင် အီးမေလ်ရှိမှ အဆက်အသွယ် ရှိဖြစ်တော့တယ်။
နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတော်များများနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရတယ်။ တချို့နဲ့ ခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမှတ်အရဆုံးကတော့ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က မြန်မာစာ ဆရာကြီး ဂျွန်အိုကဲနဲ့ ခဏတာ မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်အကြောင်း ဆွေးနွေးလိုက်ရတာပါပဲ။
နာဂစ်ဖြစ်တော့ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ကူညီတယ်။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဆရာသမား ပြီးတော့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံဒေသ အဆင့်ဆင့် တတ်နိုင်သလောက် ကူခဲ့တယ်။ ဘဝတစ်လျှောက် ကြုံဖူးသမျှမှာ စိတ်ထိခိုက်စရာ အကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပညာသင်ဆုတွေအတွက် အစဉ်မပြတ် ကူညီခဲ့တယ်။ ကိုယ့်တုန်းကလို မခက်ခဲရအောင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေပါတယ်။ မိတ်ဆွေတချို့ အလုပ်ရရေးမှာ ကူညီနိုင်ခဲ့တာလည်း ဝမ်းသာတယ်။
မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ အတော်များလာတယ်။ အရက်သောက်တဲ့ Rate ကြောက်ခမန်းလိလိ မြင့်လာတယ်။ ဘာအရက်ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ မရောဘဲ ရေခဲနဲ့ပဲ သောက်တဲ့ On the Rock သမား ဖြစ်နေတယ်။ (မှတ်ချက် – ရေခဲပင်မရောတော့ဘဲသောက်လျှင်မူ Neat ဟု ခေါ်သည်။)
နောက်တစ်ခုက မိုက်ရိုင်းလာတယ်။ စကားပြော ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းလာတယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ သောက်ကျင့်တွေကတော့ ဦးနုရဲ့ တာတေစနေသား၊ မောင်ထွန်းသူ ဘာသာပြန်တဲ့ တော်တီလာဖလက် (ပေးဖတ်သောတရားခံမှာ မတူးတူးသာ) နဲ့ ကျင်လည်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (လက်တွေ့လောကနဲ့ ဘလော့ဂ်လောက) မှာ ကြုံရတဲ့ စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုတွေကြောင့်လို့ ပုံချချင်ပါတယ်။
အားနာတတ်မှု အရင်ကထက် နည်းလာတယ်။ ကျောင်းစာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမှု နည်းနေတယ်။
အတော်စိတ်ဝင်စားကြမလားမသိဘူး။ အတော်လေး ခါးသီးတဲ့ ပြင်မရတဲ့ နှလုံးသားရေးအမှားတွေကို အရက်နဲ့ ဆေးဆေးချခဲ့တယ်။ အခုတော့ နေတတ်ပြီလို့ ပြောရမှာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က ဗေဒင်တွက်ဖူးတာ သတိရတယ်။ ခင်မင်တဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးက တွက်ပေးတာ။ မင်းဟာ နှလုံးသားရေးမှာ ဘဝတလျှောက်လုံး ချိတ် (ဂျိတ်) ပဲတဲ့။ ဘာလဲ ဦးဇင်း ဂျိတ်ဆိုတာ ဆိုတော့…၊ ဂျိတ်ဆိုတာ သူ့ကလည်း ချိတ်တယ်၊ သူဟာသူနေလည်း အချိတ်ခံရတယ်တဲ့။ သူပြောတဲ့ ဂျိတ်ဟောကိန်းက အသပြာ သိပ်မကပ်တဲ့ ပန်းချီဆရာဘဝမှာ မမှန်ခဲ့ဘူး။ ရည်စားက ထားခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်တောင် ပြုသွားသေးတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ တလျှောက်လုံးလည်း မမှန်ခဲ့ဘူး။
ဂျာနယ်လစ် ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ မှန်သွားတယ် ပြောရမှာပဲ။ ရည်းစားတွေ တပြိုင်တည်း နှစ်ယောက် သုံးယောက်ထားတယ်။ အချစ်ဆိုတာကိုလည်း ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မဖွင့်ဆိုချင်တော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်တုန်းက ကိုယ်ချစ်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလည်း ပြန်မချစ်ခဲ့ဘူး။ (ချစ်ချင်ယောင်ပဲ ဆောင်ခဲ့တယ်။) တစ်ယောက်ကို မသိတော့ဘူး။ တစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတယ်။ တစ်ခါတုန်းကဆို ရည်းစားလေးယောက်လောက် တစ်ပြိုင်တည်းထားတယ်။ ရုံးတူတဲ့ ရည်းစားတွေက ရန်တွေဖြစ်ကြ၊ မသိတဲ့သူတွေလည်း မဖြစ်ကြဘူးပေါ့။ တစ်နေ့ စိန်ပေါလ်မှတ်တိုင်မှာ ရည်းစားနှစ်ယောက်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းဆုံမိလို့ ဟိုးလေးတကြော် အရှက်ကွဲတာလည်း (ပွဲတောင်းရင်) အထုပ်ဖြေပါဦးမယ်။ ဝတ္ထုပြန်ရေးဦးမယ် စိတ်ကူးတယ်။
၂၀၀၈ မှာ အချစ်ရေး ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပဲ။ (အသေးစိတ်တော့ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့။) ကိုယ့်အပေါ်မှာ စိတ်ရှည်သည်းခံတယ်။ ဒါပေမယ့် နားလည်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ ဖီလော်ဆိုဖီစာအုပ်တွေထက် မိန်းမတွေက နားလည်ရခက်တယ်။
နာဂစ် အတွေ့အကြုံတွေ မေ့မရဘူး။
ဦးဝင်းတင် ပြန်လွတ်တာ ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ သူရဲ့ ဘာသာပြန် လက်ရာ “ကွိ”ကို အီးဘုတ် လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်။ လောလောဆယ် ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အိုဘားမားကို ထောက်ခံခဲ့တယ်။ အိုဘာမားအပေါ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်အမြင်ဆိုပြီး မေးခွန်းလေးတစ်ခု လာဗျူးတာ အသံလွှင့်ချက် ပြန် နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ ဘယ်လို ရှာရမလဲလည်း မသိဘူး။
ကျနော်အစဉ်အမြဲ ထောက်ခံခဲ့တဲ့ အဖီဆစ် ဝေ့ချ်ချာချီဝ (အဘိသိတ္တ ဝိဇ္ဇာဇီဝ) ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တာ ဝမ်းသာတယ်။
နေဘုန်းလတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ တရားမျှတတယ် မထင်ဘူး။ သူရဲရဲရင်ဆိုင်သွားတာတွေ့တော့ ယောင်္ကျားကောင်းပဲလို့ မြင်မိတယ်။ ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ဥပဒေကို အတော်ကြီး စက်ဆုပ်မိတယ်။
ပြီးတော့ မဂျစ် ဘလော့ဂ်ကို ရပ်လိုက်တာလည်း မဖြစ်စေချင်ခဲ့ဘူး။
ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဟိုတယ်၊ ဘူတာရုံနဲ့ဆေးရုံတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ မွမ်ဘိုင်း အကြမ်းဖက်မှုကလည်း ၂၀၀၉ မှာ အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာကို သတိပေးထားသလို ရှိပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး အစ္စရေးက ပါလက်စတိုင်းအပေါ်ဗုံးတွေ ကြဲချနေတာမြင်နေရတယ်။ အယ်လ်ဂျာဇီးယားက ဒဏ်ရာရ၊ သေဆုံးကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးတွေကို ပြတယ်။ တရား၏ မတရား၏ကတော့ စဉ်းစားက ခက်လှတယ်။
0 responses to “Milestone of 2008 (for Me)”
Happy New Year, Thinker. I haven’t installed the font and couldn’t see ur blog well yet. Later.. later.. 😀
အားလုံး စုံရောပဲ. ကိုသင်ကာပြောမှပဲ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို Rocker ဖြစ်နေမှန်း သတိထားမိတယ်. (ဒီက အကျင့်တွေ ကူးသွားတာလည်း ပါမယ် ထင်တယ်။ ကလေးမတွေ ကအစ ဒီမှာ Vodka ကို ရေရောတာ မမြင်ဖူးဘူး. သူတို့ကို ရှက်လို့ လိုက်ကျင့်ရာက အစ ကိုယ်ပါ ပါသွားတယ်ထင်တယ်)၂၀ဝ၉ မှာတော့ အဲဒါတွေရော၊ ဘာတွေရော ညာတွေရော ရှုပ်ရှုပ် ရှက်ရှက် မှန်သမျှ အားလုံးကို မြောင်းထဲ ကန်ချဖို့ လုပ်နေတယ်ဗျို့။ အောင်မြင်မလား တော့ မပြောတတ်သေးဘူး.။
မို္င္တုိင္မ်ားေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ားႀကီး achieve ျဖစ္ခဲ့တာပါပဲ။ ၀တဳေလးျပန္ေရးေတာ့ ဖတ္ရတာေပါ့။ ရယ္စရာေလးေတြပါထည့္ပါ။
It’s better to write comment in English. I install font to see your words. But I can’t type in Unicode format.
Well done, bro. Congratulation !! You got more outcomes than last year and wish you archiving most in 2009.